Ruuxaanta - 3 Page on 54 -
Beenalayaasha ama tuugada miyey wada yihiin inay qaadaan iskutallaabta qoortooda? Tani waa sheyga ay indhoolayaashu jecel yihiin inay xirtaan qoortooda iyaga oo aan si dhab ah u ogeyn waxa loola jeedo "Ma waxaa ugu wacan kan loo yaqaan Ciise iskutallaabta lagu qodbay?" "
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 9, 2020 06: 01 No Comments
Waxay rajeynayaan, in markii ay qoortan xirtaan qoortooda, inay si fudud badbaado ku heli doonaan waana la sii dayn doonaa, laakiin maxaa la siideyn doonaa ?? Maxaa si rasmi ah isugu xidha ?? Maxaa…	Akhri wax dheeraad ah
Hawsha lama-taaban karo ee hoggaamiyaha kiniisadaha Madow / Afrikaanka: milkiilaha cadaanka ah, ee keli ah wada-hawlgalayaasha kiniisadaha Madow / Afrikaanka, ayaa ku dhaqma xukunkiisa ugu sarreeya iyada oo aan cidina qufacaynin.
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 9, 2020 03: 03 No Comments
Dhammaantood waxay yiraahdaan aamiin erayga ugu yar. Waxay u dhagaystaan ​​si diimeed waxayna si aad ah u fiirinayaan tilmaammada ugu yar ee sayidkooda cad, wakiilka sharciga ee Wiilka Ilaah ee dhulka. Waan ku masayrsanahay ...	Akhri wax dheeraad ah
Qulqulka "Saqqara" Masar: Sanadkii 1898, waxaan ka helnay xabaal ku taal Saqqara ee Masar, shey baalal leh oo ku taariikhaysan 2000 sano kahor. JC "Maaddaama diyaaraduhu aysan ka jirin Masar qadiimiga ah, waxaa lagu qoray liin shimbiraha xayawaanka ka sameysan waxaana lagu kala saaraa hoosta n ° 6347 qeybta (caruusadda carruurtu ku ciyaarto) ee gegida matxafka Qaahira"
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 4, 2020 04: 04 No Comments
Waxay ahayd mid aan la aqoon illaa iyo 1969, markii Dr. Khalil Messiha oo bartay moodhalka Masriyiintii hore, uu xiiseynayay shimbirtan bahalkan. Isbarbardhiga qaababka hawada firfircoon ...	Akhri wax dheeraad ah
Asalka muqaddasnimada baabtiisku waa asal ka soo jeeda Afrikaanka aan ahayn reer Yurub, iyada oo laguugu hogaaminayo inaad aamintid: ahmiyada biyaha ay u leedahay Masriyiinta Madow ee qadiimka ah iyo dadyowga Madowga madow.
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 28, 2020 03: 03 No Comments
Nadiifinta Fircooniga Biyaha, Biyaha, oo ah shey loo aqoonsaday inay muhiim utahay nolosha, waxay horeyba muhiimad weyn ugu lahayd Masar. Xaqiiqdii, waxaa loo isticmaalay in ...	Akhri wax dheeraad ah